Infographic: 21 Yemagariro Midhiya Statistics Iyo Yega Mamaki Meter Inoda Kuziva Muna 2021 | Martech Zone
Pasina mubvunzo kuti pesvedzero yemagariro enhau senge yekushambadzira chiteshi inowedzera gore rega rega. Mamwe mapuratifomu anomuka, akadai seTikTok, uye mamwe anoramba akafanana neFacebook, zvichitungamira kuchinjika inofambira mberi mukuita kwevatengi. Nekudaro, nemakore vanhu vajaira mabrand anounzwa pasocial media, saka vatengesi vanofanirwa kugadzira nzira nyowani dzekubudirira pane ino chiteshi.
Ndosaka kuchengeta ziso pane zvazvino kuitika kwakakosha kune chero nyanzvi yekushambadzira. Isu tiri YouScan ndafunga kurerutsa basa iri iwe uye ndokugadzirira infographic ine chokwadi chakadai uye manhamba senge mhando dzakasarudzika zvemukati pamapuratifomu akasiyana, maitiro evatengi online, kuenzanisa kwekuenzanisira pane akasiyana mapuratifomu.
Yemagariro Midhiya Vhidhiyo Statistics:
Na2022, 84% yezvose zvirimo pasocial media zvichaunzwa mukati Video.
51% yemhando yatove uchishandisa mavhidhiyo pachinzvimbo chemifananidzo pa Instagram.
34% yevarume uye 32% yevakadzi vari kutsvaga mavhidhiyo ekudzidzisa.
40% yevashandisi vangade kuona zvimwe nzizi dzakapiswa.
52% yevashandisi vanosarudza kutarisa 5-6 maminetsi mavhidhiyo zvichienderana nepuratifomu.
Zvemagariro Midhiya Zvemukati Statistics:
68% yevashandisi vanowana yakarongedzwa zvemukati inofinha uye isingafadzi.
37% yevanoshandisa vezvenhau vashandisi vanofambisa chikafu chavaitsvaga nhau. 35% yevashandisi vari kutsvaga varaidzo.
Memes vakapfuura emoji uye maGIF mukuzivikanwa uye ikozvino ndiyo yekutanga kutaurirana chishandiso pamhepo.
Zvekuvaraidza zvemukati ndiyo nhamba yekutanga chikonzero chekushandisa TikTok.
Yemagariro Media Mutengi uye Vateereri Statistics:
85% ye TikTok vashandisi vanoshandisa zvakare Facebook, kana 86% yeiyo Twitter vateereri vari kushingawo pa Instagram.
45% yevashandisi pasirese vane mukana wekutsvaga mabrands pasocial media kupfuura pa kutsvaka injini.
87% yevashandisi vanobvuma kuti vezvenhau vakavabatsira kugadzira kutenga sarudzo.
55% yevashandisi vane kutenga zvinhu zvakananga pasocial media mapuratifomu.
Zvemagariro Midhiya Kufuridzira Statistics:
Yese $ 1.00 yakashandiswa kuvaka hukama ne inopisa inodzosera avhareji ye $ 5.20.
50% ye Twitter vashandisi vakambotenga chimwe chinhu mushure mekubatana neanokurudzira tweet.
71% yevashandisi vanoita kutenga sarudzo zvichibva pakukurudzira mazano pasocial network.
Micro-vanokurudzira yaive nemitengo yekubatanidzwa ye17.96% paTikTok, 3.86% pa Instagram, uye 1.63% paYouTube, zvichikonzera kubatanidzwa kwakawanda kupfuura veMega-vanokanganisa vaive nemitengo yekubatana ye4.96% paTikTok, 1.21% pa Instagram, uye 0.37% paYouTube.
Yemagariro Media Platform Statistics:
37% yevaTikTok vashandisi vane mari yemhuri ye $ 100k + pagore.
70% yevechidiki vanovimba IweTubers ivo vari kutevera, kupfuura chero vamwe vakakurumbira.
6 kunze kwe10 Vashandisi veYouTube vane mukana wekutevera kuraira kwevlogger pane kungoita chero mutambi weTV kana mutambi.
80% yevanhu vanofarira chigadzirwa tenga iyo mushure mekuona wongororo paYouTube.
Muna 2020, iyo yekubatanidzwa mwero pa Instagram yakawedzera ne6.4%. Panguva imwecheteyo, iyo nhamba yezvinyorwa pa Instagram feed iri kudonha: yakawanda mhando yakachinjirwa kutumira zvimwe nyaya.
YouScan AI-powered social media intelligence chikuva ine indasitiri-inotungamira yekuziva mifananidzo kugona. Isu tinobatsira mabhizinesi kuongorora mafungiro evatengi, kuwana zviitikiro zvekuona, uye kugadzirisa mukurumbira wechiratidzo.
Tags: 2021ciscoFacebookInstagrammega influencerrichinesemicro-influencermicroinfluencerpasocial media chokwadipasocial media infographicsocial media statisticssocial media statsTikTokTwittervhidhiyo bloggingvloggingisu tiri socailYouscanYouTubeyoutuber